Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Boorsada Hoose - Shiinaha Flat Bag Factory Bag
Marka la isku daro astaamaha ugu wanaagsan ee Quad Seal iyo Istaagista Boorsada, Bacda hoose ee Flat (sidoo kale loo yaqaan Box Pouch) waxay leedahay rafcaan sare oo shelf ah, iyadoo la kordhinayo labada shelf iyo baakadka lagu xirxiro guska hoose ee qaabka kartoonka ah. Dambiisha Hoosta Flat waxay u oggolaaneysaa buuxinta dusha sare ee fudud waxayna ku habboon tahay noocyo kala duwan oo codsiyo suuq ah, laga bilaabo cuntada badda, kafeega, iyo muusli, illaa cuntada xayawaanka iyo wax soo saarka beeraha. Astaamaha Bag Bacda Flat-ka ah Dahaadh adag oo adag ayaa bixiya adkaanta ugufiican ee is-istaag kaamil ah a ...
Marka la isku daro astaamaha ugu wanaagsan ee Quad Seal iyo Istaagista Boorsada, Bacda hoose ee Flat (sidoo kale loo yaqaan Box Pouch) waxay leedahay rafcaan sare oo shelf ah, iyadoo la kordhinayo labada shelf iyo baakadka lagu xirxiro guska hoose ee qaabka kartoonka ah. Dambiisha Hoosta Flat waxay u oggolaaneysaa buuxinta dusha sare ee fudud waxayna ku habboon tahay noocyo kala duwan oo codsiyo suuq ah, laga bilaabo cuntada badda, kafeega, iyo muusli, illaa cuntada xayawaanka iyo wax soo saarka beeraha. Noocyada hoose ee Flat & Fadhiga Istaag Bacda adag ee lamination xoog leh waxay bixisaa adkaanta ugufiican ee kaamil ah ...
Marka la isku daro astaamaha ugu fiican ee Quad Seal iyo Istaag Istaag, Khariidadda Kraft Paper Flat Bottom Bag (sidoo kale loo yaqaan Box Pouch) waxay leedahay rafcaan sare oo shelf ah, iyada oo la kordhinayo labada shelf iyo baakadka lagu xareeyo guska hoose ee qaabka kartoonka ah. Dambiisha Hoosta Flat waxay u oggolaaneysaa buuxinta dusha sare ee fudud waxayna ku habboon tahay noocyo kala duwan oo codsiyo suuq ah, laga bilaabo cuntada badda, kafeega, iyo muusli, illaa cuntada xayawaanka iyo wax soo saarka beeraha. Noocyada 'Kraft Paper Flat Gott Bag Bag' oo adag dukumiintiyo adag ayaa bixisa adkaanta ugu fiican ee ...